2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ် (308103-40-4) - APICMO
ထုတ်ကုန်များ > 2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ် (308103-40-4)
2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ် (308103-40-4)
, ထုတ်လုပ်ရန် synthesize နှင့် CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် 2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ် (308103-40-4) ၏အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း
2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ် (308103-40-4) ကဗီဒီယို
ဘက်တီးရီးယားရောဂါပိုး၏ပဋိဇီဝဆေးယဉ်ပါးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့သာယာဝပြောရေးတစ်ခုတိုးပွားလာခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်စေခြင်းနှင့်အရေးတကြီးရောဂါကူးစက်ရောဂါနှင့်ပဋိဇီဝဆေးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအသစ်မဟာဗျူဟာအဘို့အရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ အဆိုပါပဋိဇီဝဆေးယဉ်ပါးပြဿနာသည်အနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ပဋိဇီဝဆေး၏ကျယ်ပြန့်သုံးစွဲခြင်းကနေပေါ်ပေါက်။ အကောင်းဆုံးကတော့, ရောဂါကူးစက်မှု၏ကုသမှုများအတွက်, တဦးတည်းအထူးပစ်မှတ်ထားနှင့်ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ရောဂါပိုးမျိုးဦးသေဆုံးတဲ့ကျဉ်းမြောင်းတဲ့-spectrum ကိုပဋိဇီဝဆေးသုံးစွဲဖို့လိုပါတယ်။ ဤသည်အကျိုးရှိသောနှင့်လူသားတစ်ဦးဖြစ်လျက်ရှိ၏ကျန်းမာရေးကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်စိုးရိမ်ရသော commensal ဘက်တီးရီးယားမျိုးစိတ်စဉ်းစားအထူးအရေးကြီးပါသည်။ တိုက်ရိုက်လွှဘက်တီးရီးယားဆဲလ်တွေဆန့်ကျင်စာကြည့်တိုက်၏ screening ပဋိဇီဝဆေးယဉ်ပါးဖော်ပြရန်ကြောင်း Staphylococcus Aureus နှင့် Acinetobacter baumannii ၏လက်တွေ့မျိုးကွဲများအတွက် submicromolar နှင့်အလွန်အမင်းတိကျတဲ့ Binder ဖြစ်ထွန်း။
Bioorthogonal conjugation ဓာတုဗေဒရှုပ်ထွေးဇီဝစနစ်များ၏စစ်ကြောရေးများအတွက် tool များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို enabled သိရသည်။ bioorthogonal တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုအရေအတွက်ကိုစာပေတွင်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသော်လည်း, သူတို့သည်နှေးကွေး kinetics, အ conjugation ထုတ်ကုန်များ၏အနိမ့်တည်ငြိမ်မှု, အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ခြင်း၏လိုအပ်ချက်အပါအဝင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အများအပြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်လျော့နည်းစံပြဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, မရည်ရွယ်သော biomolecules နှင့်အတူတုံ့ပြန်မှုဖက်က။ အဆိုပါ boron အက်ဆစ် moiety ကိုအလွန်တည်ငြိမ်သော diazaborine သို့ပြန်စီသော semicarbazone conjugation ၏ကနဦးဖွဲ့စည်း accelerates ။ အဆိုပါ diazaborine ဖွဲ့စည်းရေး biomolecules ကနေအနည်းငယ်မျှသာဝင်ရောက်စွက်ဖက်နှင့်အတူအသှေးကိုသွေးရည်ကြည်သို့မဟုတ်ဆဲလ် lysates အတွက်ဖျော်ဖြေနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကဒြပ်အမိုင်နိုအက်ဆစ် D-AB3 ၎င်း၏ဘေးထွက်ကွင်းဆက်အဖြစ် 2-acetylphenylboronic အက်ဆစ် moiety တင်ဆက်သော Escherichia coli အဘို့အထူးသဖြင့်မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့, ဆဲလ်မြို့ရိုးကိုပြုပြင်မှတဆင့်အကြိမ်ကြိမ်ဘက်တီးရီးယားမျိုးစိတ်သို့ထည့်သွင်းရန်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ တစ်ဦး fluorophore-တံဆိပ်ကပ် semicarbazide မှနောက်ဆက်တွဲ D-AB3 conjugation အသွေးသည်သွေးရည်ကြည်အတွက်ဒီဘက်တီးရီးယားရောဂါပိုးများကြံ့ခိုင်ထောက်လှမ်းခွင့်ပြုပါတယ်။
2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ် (308103-40-4) အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
CAS အောင်မင်း% 95.0
CAS မက်% 100.0
MDL အရေအတွက် MFCD01321263
InChI Key ကို ZKAOVABYLXQUTI-UHFFFAOYSA-N ကို
ဓာတုအမည်သို့မဟုတ်ပစ္စည်း 2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ်
အနီအောက်ရောင်ခြည် Spectrum အစစ်အမှန်ဖြစ်သော
assay ရာခိုင်နှုန်း Range 96%
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံ အမှုန့်သို့မဟုတ် Chunk
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 163.967
အပြုံး B က (C1 = CC ကို = CC ကို = C1C (= အို) ကို C) ​​(O) အို
အရည်ပျော်မှတ် 170.0 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ် (308103-40-4) အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကိုင်တွယ်မှု
ဖုန်မှုန့် / အငွေ့ / ဓာတ်ငွေ့ / အခိုးအငွေ့ / အငွေ့ / မှုန်ရေမွှားအသက်ရှူခြင်းကိုရှောင်ပါ။
ဖုန်မှုန့် / အငွေ့ / ဓာတ်ငွေ့ / အခိုးအငွေ့ / အငွေ့ / မှုန်ရေမွှားအသက်ရှူခြင်းကိုရှောင်ပါ။ အကာအကွယ်လက်အိတ်နှင့်မျက်စိ / မကျြနှာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဝတ်ဆင်။ မျက်လုံးများလျှင်: မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့ရေနှင့်အတူသတိဆေး။ ပစ္စုပ္ပန်နှင့်ပြုပါရန်လွယ်ကူလျှင်, မျက်ကပ်မှန်ဖယ်ရှားပါ။ လက်မဆေး Continue ။ ရှိုက် IF: လတ်ဆတ်သောလေကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်အသက်ရှူဘို့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားတွင်ကြွင်းသောအရာမှာစောင့်ရှောက်လော့။ Store ကိုဖွင့်သော့ခတ်။ / အမျိုးသားရေး / ဒေသဆိုင်ရာ / ဒေသခံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီရဲ့ contents / ကွန်တိန်နာများဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။
2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ် (308103-40-4) ဆောင်းပါးများ
Aldrich arylboronic အက်ဆစ်သည်ဆူဇူကီးနားချင်းဆက်မှီစမ်းသပ်မှု၏အဆောက်အဦလုပ်ကွက်၎င်း၏ပြည့်စုံရွေးချယ်ရေးတင်ဆက်ဖို့ကျေနပ်သည် ...
Aldrich ChemFiles 2001,
အများစုမှာ boron အက်ဆစ်အလွယ်တကူတစ်သိသိ (trimer) anhydride ပေးရရေဓါတ်ခန်းခြောက်တုံ့ပြန်မှုခံယူ ...
Aldrich ChemFiles 2007,
2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ် (308103-40-4) နည်းပညာပိုင်းဝန်ဆောင်မှု:
2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ် (308103-40-4) အစုလိုက်မှာယူမှု & စျေးနှုန်း:
အဘို့အ 1 ပြန်လည်သုံးသပ် 2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ် (308103-40-4)
APICMO - 12 / 06 / 2018
APICMO 2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ်, 308103-40-4 ၏ကြီးမားသော volumes ကို, synthesizing ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ဓာတုထုတ်ကုန်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုကဘွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုထုတ်ကုန် synthesizing တဲ့အခါမှာကျနော်တို့တင်းကြပ်စွာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအပေါ် CGMP နေဖြင့်သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာပါ။
2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ်, 308103-40-4 ဖျေါပွခကျြ
Monosubstituted Aryl boron အက်ဆစ်။
Aryl boron အက်ဆစ်။
ဤသူအပေါင်းတို့သည်ထုတ်ကုန် anhydrides ၏မတူညီဒီဂရီဆံ့။
2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ်, 96% ။
RARECHEM AH PB 0161 ။
IUPAC အမည်: (2-acetylphenyl) boron အက်ဆစ်။
ဓာတုအမည်: 2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ်။
2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ်ဓာတုနှင့်ကာယ Properties ကို
NO CAS 308103-40-4 ။
မော်လီကျူးဖော်မြူလာ C8H9BO3 ။
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 163.97
အရည်ပျော်မှတ် 170 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သိုလှောင်ခြင်းအပူချိန် 0-6 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ရေဆူမှတ် 349.9mmHg မှာ 760 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သိပ်သည်းဆ 1.19 g / cm3
Monoisotopic အစုလိုက်အပြုံလိုက် 164.064 g / mol
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘွန်း Donor- 2
covalent ဘွန်း 1
rotate စဘွန်း 2
အကောင်းဆုံးကတော့, 2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ်အကြံပြုသိုလှောင်မှုနဲ့ကိုင်တွယ်အခြေအနေများအောက်တွင်ယေဘုယျအားဖြင့်တည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်အကျွံအပူသို့မဟုတ်အလင်းမှမြင်အောင်မပြပါနဲ့။
2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ်, 308103-40-4 computing Properties ကို
အတိအကျ Mass (ဆ / mol) 164.064
မိုးသည်းထန်စွာ Atom အရေအတွက် 12
အိုင်ဆိုတုပ် Atom အရေအတွက် 0
သတ်မှတ် Atom Stereocenter အရေအတွက် 0
သတ်မှတ်ဘွန်း Stereocenter အရေအတွက် 0
undefined Atom Stereocenter အရေအတွက် 0
undefined ဘွန်း Stereocenter အရေအတွက် 0
Topological ဝင်ရိုးစွန်းမျက်နှာပြင်ဧရိယာ 57.5A ^ 2
compound Canonicalized ဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့
2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ်, 308103-40-4 များအတွက်ပေါင်းစပ်လမ်းကြောင်း
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောညွှန်ပြအဖြစ် 308103-40-4 ဖန်တီးစေခြင်းငှါအရာသုံးခုလမ်းကြောင်းများရှိပါသည်:
2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ်အဘို့အ Synthesis လမ်းကြောင်းအကြံပြု
2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ်, 308103-40-4 Applications ကို
308103-40-4 များတွင်အသုံးပြုစေခြင်းငှါတစ် reactant ဖြစ်ခြင်း,
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်ကကမကထပြုခဲ့ heteroaryl အီ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း။
ဆူဇူကီး-Miyaura များအတွက်တုံ့ပြန်မှု cross-နားဆက်မှီရာတွင်။
တစ်စုံလုံပယ်လေဒီယမ်ရှုပ်ထွေးအဖြစ် diastereoselective တွဲဖက်ပယ်ဖျက် Catalyzing ။
ကြေးနီဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ် Transmetalation နှင့် homocoupling ။
2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ်နှင့်အတူကျန်းမာရေးဘေးအန္တရာယ် Associated
ဝမ်းလျှောနှင့်အတူအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းယားယံ 308103-40-4 မျိုချမိပါလျှင်, ပျို့ခြင်းနှင့်အန်ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်။
ရေနှင့်သုတ်ပြီးတော့ရေသို့မဟုတ်နို့ 2-4 ခွက်သောက်ပါ။
အကြောင်းကို 15 မိနစ်အဘို့သင့်မျက်စိရှင်းလင်းရန်ရေ running များများသုံးပါ။
အကြောင်းကို 15 မိနစ်ဘို့ရေကိုအပြေး၏ပဒေသာနှင့်အတူရက်ရက်ရောရောသင့်ရဲ့အသားအရေရှင်းလင်းရန်။
အကြံဉာဏ်နှင့် / သို့မဟုတ်အာရုံစူးစိုက်မှုများအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ထိတွေ့မှုကနေသားကောင် Remove နှင့်စေခြင်းငှါငါချက်ချင်းလတ်ဆတ်တဲ့လေထု၏လုံလောက်သောထောက်ပံ့ရေးနှင့်အတူထားပါ။
ပါးစပ်-to-နှုတ်ဖြင့်ဓာတုထိတွေ့တဲ့သားကောင် resuscitate ဘယ်တော့မှမ။
သငျသညျ 308103-40-4 ထိတွေ့ပြီးနောက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရှာအံ့သောငှါအခါတိုင်း, အမတက်ရောက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူပေးဘေးကင်းလုံခြုံမှု data တွေကိုစာရွက်ဆောင်ခဲ့ရမည်။
2 ။ 2-308103-40 အင်ဂျင်နီယာထိန်းချုပ်မည် 4-Acetylphenylboronic အက်ဆစ်။
308103-40-4 ၏သိုလှောင်မှုသို့မဟုတ်အသုံးချဘို့အပေါငျးတို့သအဆောက်အဦတစ်ခုဘေးကင်းလုံခြုံမှုရေချိုးခန်းနှင့် eyewash တပ်ဆင်ထားရပါမည်။
3 ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး။
တစ်ခုလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုဖုံးလွှမ်းရန် impervious အဝတ်အစား; အဝတ်, တိကျတဲ့အလုပ်ခွင်မှလေးစားမှုအတွက်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်၎င်း၏အာရုံစူးစိုက်မှုကအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရေမှတ်၏ဒီဂရီကိုရွေးချယ်ရပါမည်။
အဆိုပါလက်အိတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်မှန်ကန်သော technique ကိုသုံးတတ်၏ ဒါကြောင့်ပြီးသားညစ်ညမ်းနေသည်အဖြစ်လက်အိတ်၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်မထိကြဘူး။
4 ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကာကွယ်မှုနှင့်လုံခြုံရေး
5 ။ 308103-40-4 အသုံးပြုခြင်းတဲ့အခါမှာယူပါရန်ဆောင်ရွက်ချက်များ
ဖုန်မှုန့်သို့မဟုတ် Aerosol ဖွဲ့စည်းရန်မထားပါနဲ့။
အသက်ရှူခိုးအငွေ့, သဘာဝဓာတ်ငွေ့, မွမှေုနျ့နှငျ့အငွေ့ရှောင်ကြဉ်ပါ။
အဆိုပါအလုပ်လုပ်ကိုင်ဧရိယာ eyewash နှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးရေချိုးခန်းတပ်ဆင်ထားရပါမည်။
6 ။ သငျသညျ 308103-40-4 အသုံးပြုခြင်းပြုပြီးတာနဲ့ပြီးနောက်ဆောင်ရွက်ချက်များကိုစဉ်းစားပါ
ကက်ဘိနက်သေချာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလူပုဂ္ဂိုလ်များကွာစောင့်ရှောက်ဖို့ lockable ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးညစ်ညမ်းအဝတ်အစားနှင့်ဖိနပ် Remove နှင့်ပြန်သုံးဖို့ကြိုတင်သူတို့ကိုဆေးကြောပါ။
တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးဘို့ရေနှင့်ပျော့ဆပ်ပြာ running များများနှင့်သင်၏လက်၌ဆေးကြောပါ။
7. ယင်းပြီးနောက်သေချာ 308103-40-4 အသုံးပြုခြင်းမဟုတ်သောအခါ,
308103-40-4 ဝေးကဲ့သို့သောအထူးအန္တရာယ်ရှိသောထုတ်ကုန်ထံမှသိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်သေချာ; ကာဗွန်အောက်ဆိုဒ်, ဘိုရွန်အောက်ဆိုဒ်နှင့် borane ။
8 ။ 2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ်, 308103-40-4 သိုလှောင်မှုနှင့်ကိုင်တွယ်မှု
အကြံပြုအခြေအနေများနှုန်းအဖြစ် Store က 308103-40-4; ဝေးပိုလျှံအပူကနေတစ်ဦးအေးမြပြီးခြောက်သွေ့ရာဌာန၌ထားပါ။
ပျောက်ဘိုရွန်အောက်ဆိုဒ်, borane နှင့်ကာဗွန်အောက်ဆိုဒ်နဲ့တူအထူးအန္တရာယ်ရှိသောဓာတုပစ္စည်းကနေထားပါ။
အလင်းမှ 2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ်မြင်အောင်မပြပါနဲ့။
သဘာဝဓာတ်ငွေ့, အခိုးအငွေ့, အငွေ့သို့မဟုတ်မြေမှုန့်ရှူမထားပါနဲ့။
9 ။ ဓာတုရှင်း
ဒေသခံဖက်ဒရယ်နှင့်ပြည်နယ်စည်းမျဉ်းအညီ 308103-40-4 များဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။
တစ်ဦးကမီးလောင်ပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့အရည်ပျော်ပစ္စည်းအတွက်ဖျက်သိမ်းအခါစွန့်ပစ်ကိုမီးရှို့ဖို့ afterburner နှင့် scrubber တပ်ဆင်ဓာတုမီးရှို့ဖျက်ဆီးကိုသုံးပါ။
10 ။ 2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ်, 308103-40-4 ထိခိုက်လွယ်မှုနှင့် reactivity
သာမန်ကိုင်တွယ်နှင့်သိုလှောင်မှုအခြေအနေများအောက်တွင်ပိတ်သိမ်းဆည်းထားသည့်အခါ 308103-40-4 အခန်းအပူချိန်မှာတည်ငြိမ်နေဆဲဖြစ်သည်။
308103-40-4 ပိုလျှံအပူ, အလင်းနှင့်မြေမှုန့်မှအထိခိုက်မခံဖြစ်ပါတယ်။
308103-40-4 အန္တရာယ်ရှိသောပြိုကွဲထုတ်ကုန်များမှာ; ဘိုရွန်အောက်ဆိုဒ်, ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့များနှင့်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်။
11 ။ 2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ်အဘို့အမတော်တဆဆောင်ရွက်ချက်များ
သဘာဝဓာတ်ငွေ့, ဖုန်မှုန့်, အငွေ့သို့မဟုတ်အခိုးအငွေ့ကိုရှူရှိုက်မထားပါနဲ့။
မွမှေုနျ့နှငျ့ Aerosol ဖွဲ့စည်းရှောင်ကြဉ်ပါ။
308103-40-4 များအတွက်ဆောင်ရွက်ချက်များ Extinguishing မီး
308103-40-4 အပူပြိုကွဲအလွန်အမင်းအဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ generate စခွေငျးငှါကတည်းကသင်တစ်ဦး Self-ပါရှိသောအသက်ရှူယန္တရားဝတ်ဆင်အာမခံပါသည်။
ကဲ့သို့သောမီဒီယာ extinguishing သင့်လျော်သောသုံးတတ်၏ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်, အရက်-ခံနိုင်ရည်ဓာတုရေမြှုပ်ခြောက်သွေ့ဓာတုတစ်ခုသို့မဟုတ်ရေမှုန်ရေမွှားကိုအသုံးပြုပါ။
11 ။ 2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ်စည်းမျဉ်း .
ဒီဓာတုပစ္စည်းအဘယ်သူမျှမ Sara ခေါင်းစဉ် III ကိုပုဒ်မ 302 အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားကိုမဆိုအစီရင်ခံလိုအပ်ချက်များဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။
12 ။ 2-Acetylphenylboronic acid.Shipping အချက်အလက်
308103-40-4 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါငျးတို့သ Modes သာသင့်လျော်သည်။
သိပ္ပံပညာရှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ Chromatography, အသက်ရှင်ခြင်းကိုသိပ္ပံ, ပစ္စည်းသိပ္ပံ, သုတေသန analysis နှင့်ဓာတုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအားလုံးဒေသများရှိကြုံတွေ့ဖြစ်ပါတယ်။
14 ။ 2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ် 308103-40-4 အစုလိုက်အမိန့်နှင့်စျေးနှုန်း
သင်သည်သင်၏သုတေသနသို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် 2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ်အမြောက်အမြားနှင့်အတူထောက်ပံ့ဖို့လိုပါလျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါနှင့်သင့်အလို့ငှာနေရာအခမဲ့ခံစားရသည်။
ဓာတုဗေဒ၏နယူးဂျာနယ်, vol ။ 23, #7စ။ 683 - 685
ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်, အမေရိကန်သည်အမျိုးသားလုံခြုံရေးရေးစင်တာ။ ဆေးပညာ, Pubchem အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်, 2-Acetylphenylboronic အက်ဆစ်, ကဏ္ဍများ 1-9 ။
အဆိုပါထောင်စုနှစ်စာမျက်နှာ 16-1999 မှာသိပ္ပံ, Boron ဓာတုဗေဒ - R. ဘရုစ်ဘုရင်, Elsevier, 402 စက်တင်ဘာ 405 ။
ပြန်လည်သုံးသပ် Add ပြန်ကြားချက် Cancel
သင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် rate ... စုံလင်သော ကောင်းသော ပျမ်းမျှ ကမဆိုး အလွန်ဆင်းရဲ